Git Sangit News » खुशीको खबर ! एक महिनाभित्रै को’रोनाको खोप बजारमा आउने,
खुशीको खबर ! एक महिनाभित्रै को’रोनाको खोप बजारमा आउने,
काठमाडौ । खुशीको खबर, आगामी डिसेम्बरभित्र को’रोनाको खोप आउने सम्भावना देखिएको छ । को’रोना खोप उत्पादनमा सक्रिय औषधी उत्पादन कम्पनीहरुले यस्तो संकेत दिएका हुन् । औषधी उत्पादनमा सक्रिय मध्येका एक एस्ट्राजेनेका फार्मासियुटिकल्सका सिइओले आगामी डिसेम्बर अ’न्त्य सम्ममा को’रोना भा’इरसको खोप तयार भइसक्ने सम्भावना देखिएको बताएका छन् । कम्पनीका सिइओ पास्कल सोरियटले नियमन गर्ने निकायहरूबाट अनुमति पाएपछि खोप सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध हुने बताएका हुन् । त्यहाँ पनि यसका दुइटा परीक्षणमा सफल नतिजा आएको छ भने तेस्रो पनि प्रभावकारी देखिएको एस्ट्राजेने चीनका अपरेसन हेड लियोन जाङले जनाएका छन् ।
यो बाहेक चीनले आफैं बनाउँदै गरेको खोप पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ । यो खोप सिनोभाक, वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायो प्रोडक्सनर सिनोफार्म, केनसिनो बायोलोजिकल र बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोटेक्नोलोजीले बनाइरहेका छन् । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा छापिएको समाचार अनुसार, रुसमा तयार भइरहेको स्पुतनिक–भी खोपमा पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको एक रिपोर्टले जनाएको छ ।
मस्कोको गाम्ल्याया अनुसन्धान संस्थानका प्रमुख अलेक्ज्याण्डर गिटन्बर्गका अनुसार यो खोप सुरक्षित छ भन्न पर्याप्त उदाहरण छन् । उनले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन यसको अतिरिक्त डोजको आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन् । भारतीय बायोटेक, आइसिएमआर र नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीले पनि संयुक्त रूपमा खोप बनाइरहेको छ । उनीहरूले बनाइरहेको खोपमा पनि विकास देखिरहेको छ । अमेरिकी फर्म नोभाभ्याक्सले परीक्षण गरिरहेको कोरोना खोप पनि तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेको छ । त्यस्तै जोन्सन एन्ड जोन्सनले बनाइरहेको खोप पनि अन्तिम चरणको परीक्षणमा पुगेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:३४